2013-03-24 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​အား​လုံး​ပဲ ​ခု​နောက်​ပိုင်း ​တင်​မယ့် software ​များ​များ​ကို ​သုံး​နည်း license version ​လုပ်​နည်း ​စ​တာ​တွေ​နဲ့ ​တွဲ​ပြီး​တင်​ပေး​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​လုံး​ဝ​ဝ​မှ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ရင်​တော့ video tutorial ​ရှင်း​ပြ​ချက်​နဲ့ ​တွဲ​တင်​ပေး​သွား​ပါ့​မယ်. ​အ​ခု​က ​လိုင်း​ကောင်း​တုန်း software ​တွေ​တင်​ပြီး ​နေ့​လည်​ပိုင်း ​လိုင်း​မ​ကောင်း​တဲ့ ​အ​ချိန်​ကျ​မှ ​စာ​အုပ်​ကို ​တင်​ပေး​ပါ့​မယ်။ ​လု​ပြီး​တော့ ​လုပ်​နေ​ရ​လို့​ပါ။ ​မ​နက်​ပိုင်း​လောက်​ပဲ ​အင်​တာ​နက်​လိုင်း​က ​ကောင်း​လို့​ပါ။ ​ခု​နောက်​ပိုင်း ​ဖိုင်​တွေ​ကို Direct link ​တွေ​ချည်း​ပဲ ​ချ​ပေး​ထား​မှာ​ပါ။ ​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ ​တန်း​ပြီး​တော့ Download link ​ကျ​လာ​အောင်​လို့​ပါ။ ​တ​ချို့​က ​အဲ့​လို​မျိုး​မှ ​သ​ဘော​ကျ​လို့​လေ။ ​အ​ဆင်​လည်း​ပြေ​ပါ​တယ်။ ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။
(​ရှင်း​ပြ​ချက် video ​နှင့် PDF ​စာ​အုပ် ​တင်​ရန်​ကျန်​သေး)